नायिका गौरी मल्लको प्रधानमन्त्री लाई खुला पत्र, सिंहदरबार र बालुवाटार भन्दा बाहिर पनि नेपाल छ यो कुरा नबिर्सनु होला – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/नायिका गौरी मल्लको प्रधानमन्त्री लाई खुला पत्र, सिंहदरबार र बालुवाटार भन्दा बाहिर पनि नेपाल छ यो कुरा नबिर्सनु होला
लकडा`उनको सुरुवातसँगै भारत बाट नेपाल भित्रिने नागरिकलाई कैयौं दिन बोर्डरमा बिचल्ली बनाएर रा`खियो। कैयन नेपाली त लुकीलुकी हिंडेरै भए पनि घरमै पुगेर मर्छौं भनेर हिँडे पनि। कत्तिले धेरै ढिला आफ्नो घर परिवारको मुख हेर्न पाए। त्यस समय यति सम्म भनियो ‘नेपालमा भित्रेका कोरोनाको सं`क्रमण सबै भारत बाटै आएको’ हो। स`त्तामा टिक्न जे पनि बोल्न सकिन्छ ।
आज उनै नागरिक आफ्नो ज्यान जो`खिममा राखेर भारत`तर्फ़ जाँदैछन्। यतिबेला चाहिं ती मधुर वाक्य कता हराए ?अरुलाई एउटा औंला देखाउँदा आफुतिर अन्य तीन औंला फर्किरहेका हुन्छन भन्ने उखान यहाँ आएर चरितार्थ भएन र ? हिजो भारतबाट कोरोना नेपाल आएको भन्ने मुखले आज आफ्ना नागरि`हरुलाई ‘ए मेरा प्यारा नेपाली नागरिकहरु, भारतमा कोरोनाको प्रकोप बढ्दो छ, नेपालमै बस जे गर्न पर्छ हामी गर्छौं’ भनेर किन भन्न सकिरहेको छैन ?
यो मेरो प्रश्न यहाँलाई नै हो। तपाईंको नागरिकको हसियतले येत्ति प्रश्न गर्ने अधिकार हुन पर्छ मलाई। कोरोना`को प्रकोपसंगै नेपालले कमसे कम आफ्ना नागरिक एकत्रित गर्ने मौका पायो। नेपालमै रोजगारी उन्मुख कार्य गर्ने समय आयो भन्ने सबैलाई लागेको थियो, तर यी सब कुराह`रुसंग सरकार`लाई कुनै सरोकार नै रहेन छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखियो।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पहिला आफ्नो देश र जनताको अवस्था सुधार्नुपर्यो। सानातिना जस्तो हुन्छ रोजगार दिनतर्फ़ लाग्नुपर्यो। आफ्ना नागरिकको दुःख, समस्या, विपद बेरोजगारीले निम्त्याएको मानसिक अवस्थासंग भिज्नु`पर्यो किनकि समस्या जबसम्म आफ्नो बन्दैन, त्यो कहिले समाधानतर्फ़ बढ्दैन। यो देश नै तपाईंको घर हो। हामी जनता नै तपाईंका परिवार हौँ।
मदन कृष्ण भन्छन् – “कुलमानलाई त्यहि पदमा पूनर्बहाली नमिले माथिल्लो पदमा नियुक्त गरौं”